18 Inoshamisa Inoshamisa Hutano Mubatsiro kana uchinakidzwa neFrance Waini
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Waini & Midzimu » 18 Inoshamisa Inoshamisa Hutano Mubatsiro kana uchinakidzwa neFrance Waini
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Culinary • tsika nemagariro • France Kuputsa Nhau • Health News • nhau • ushanyi • Trending Now • Waini & Midzimu
Kunwa girazi reFrench Wine pazuva kunogona kubatsira neAlzheimer, Cancer, Kurasikirwa kweMemory, Bone Density, Maziso Akagwinya, High Cholesterol, chirwere chechiropa, sitiroko, kushushikana, mhango, dzihwa rakajairika. Heino chikonzero nei:
Cheki mufriji uye kabhineti yewaini uye GRRRR. Mabhodhoro acho ANOKOSHA!
Ndiri kuda girazi rewaini (pamwe zvishoma) - asi zvirokwazvo kwete bhodhoro. Zvekuita?
Sanganisa gin uye tonic kana scotch pamatombo, kana kugadzirisa Diet Coke (isina imwe nzira inoshanda)?
Kwemakore angangoita maviri, ndakavharirwa munzvimbo inoita kunge ichadzikira, miniti neminiti. Iyo wachi iri pakombuta yangu inoita kunge inomhanya zvishoma, uye zvinotora zvachose kusvika panguva yekumira zviri pamutemo. Chekupedzisira, yava 5 PM, nguva yakakodzera yekuvhara nekuvhura bhodhoro rewaini yeFrance.
French Waini Mifananidzo
Kune akawanda mazinga emafaro anofambidzana nekufunga nezve waini yeFrance: yakanaka yekare chateaux, yakasvibirira minda yemizambiringa; mizambiringa yakaturika nemazambiringa anoputika neanogona; nyowani inotapira, uye inonhuwa mhepo inopenya ne organic organic; ruzha rwenyuchi dzinokohwa nekita kudyisa vashandi vadzo.
Uyezve, pane iyo waini pachayo. French waini hazviwanzo kuchenjera - unogona kuda zvinorova mhino dzako, kupfeka rurimi rwako, kunonoka muchidimbu mumuromo mako, uye zvinosiya ndangariro dzinoshanya nekukurumidza zvobva zvanyangarika zvinyangarika… kubvumira nguva yakanaka yekusimudza girazi uchifungidzira kunwa kunotevera… kana hauna.
Kwemazana emakore, waini yeFrance yanga ichichiva, chinodikanwa, uye chinwiwa chakatenderedzwa pasirese. Pfungwa yechiFrench ye "terroir" inosanganisira zvese kubva kune tembiricha yenzvimbo kusvika kuacity yevhu - zvese zvinokanganisa zvakanyanya uye zvinokisa mhando, kuravira, kunhuwidza, uye kunhuhwirira kwemazambiringa anoshandiswa kugadzira waini.
Kubvira munhoroondo, zvinhu zvakatipoteredza zvakakonzera waini, kubva pakudziya kwepasirese kusvika pakuvandudza kwemaindasitiri, uye kufamba kwevanhu, kusvika kuzviuru zvezvimwe zviitiko zvakasindimara uye zvisingakwanisike kudzorwa. Parizvino, matambudziko akatarisana nevagadziri vewaini veFrance anosanganisira mitero, kunonoka kutakura, kushomeka kwemakontena, kunonoka kusvika, kushanduka kwemari, uye "nzou iri mukamuri," COVID-19. Nenyaya dzese dzakatarisana neFrance bhizinesi rewaini, indasitiri inoshandisa vashandi vangangosvika zviuru makumi mashanu nezvishanu (558,000), vanhu vari kutya kuti mizinda mizhinji yemhuri yemizambiringa ichatadza kumira nekurwiswa kuri kuita matambudziko uye ingavhara kana kutengesa kune vagadziri vewaini vakuru.
Ichokwadi chekuvhunduka pamusika wewaini yeFrance chakashamisa sezvo musika wewaini yakawandisa wakadzorwa neFrance, neBordeaux neBurgundy accounting zvichiteerana kweanosvika makumi mashanu muzana uye makumi maviri muzana pabasa rekutengesa mu50 (Live-ex. com). Neraki, pane nhau dzakanaka - muhafu yekutanga ya20, France yakaburitsa mahekita mamirioni e2019 ewaini yakakosha pamamiriyoni mashanu emamiriyoni emaEuro anomiririra kuwedzera kwe2021 muzana nehuwandu uye makumi mana muzana nemutengo uchienzaniswa nemwedzi mitanhatu yekutanga ya7.3, panguva yekuvhara . Kutengeswa kwewaini yeFrance kuri kupfuura avo panguva yemafungu ekutanga eCOVID uye vari kudzokera kumatanho ekukura mukuwandisa kwemaitiro e pre-COVID.
Musika weAmerica urikutengazve waini yeFrance kubva kumiswa kwemitero yaTrump / Airbus yeiyo ichiri waini, tisingatauri kutakura zvinyorwa zvewaini inopenya, kusanganisira Champagnes. Muna Kubvumbi 2021 France yakatumira kunze mahekita mazana maviri negumi nemazana manomwe ewaini anokosheswa nemakumi maviri emaeuro ayo anokwana kuita mazana mapfumbamwe muzana muzana uye chikamu chegumi nemakumi mapfumbamwe nechimwe kubva muzana zvichienzaniswa naApril 221,000 (vitisphere.com).
Zvakanakira Kunwa Waini
Zvinoshamisa kukurudzira kuti uzive kuti kusveta girazi rewaini yeFrance kwakanakira hutano hwangu sezvo mazambiringa ari iwo manyuko eakawanda mabhenefiti. Waini inoburitsa manganese, potasium, iron, phosphorus uye Vitamin B6. Iinewo magnesium, chicherwa chinogona kubatsira kudzikisa BP uye huwandu hweshuga yeropa, zvichideredza njodzi yechirwere chemwoyo, chirwere cheshuga, uye sitiroko. Iwo ma antioxidants ari muwaini anorwisa kukuvara kwemasero mumitumbi yedu inokonzerwa nekukwegura uye zvinhu zvakatipoteredza senge kusvibiswa uye mararamiro. Nekudzivirira uye kudzoreredza uku kukuvara kwesero kudya kwakazara ma antioxidants kunogona kudzikisa njodzi dzekukura kwezvirwere zvisingaperi zvinosanganisira cancer.
French waini mushonga unoshamisa kune dieters sezvo paine chete 121 macalorie mune 150 mamililita ewhite chena uye zvine mwero sips inogona kukurudzira itsvo hutano, uye kudzivirira kubva kuAlzheimer's chirwere. Waini tsvuku (ine 127 macalorie) ine vhitamini uye zvicherwa zvakakwirira uye ine kanokwana kagumi nhamba ye polyphenols (zvinomera zvinomera zvine antioxidant zvivakwa) chena waini.
Saka - pane nhau uye nhau dzakanaka. Maini echiFrench anowanikwa muUSA uye haangonanzva zvakanaka chete, asi zvakare ane hutano kune hutano hwangu.
Nekudaro, ini ndichine dambudziko rehukuru hwehombodo. Bhodhoro riine makumi maviri nemaviri mauraidhi zvino rave kutambirwa zvakajairika seyakajairwa waini. Munguva pfupi yapfuura, mabhodhoro madiki ave kuwanikwa zvakanyanya. Iko kukonzeresa kwemabhodhoro madiki pane kunwa hakuzivikanwe kunyangwe hombodo diki iine mukana wekudzikisa kushandiswa nekuwedzera simba rinodiwa kuvhura nekudya zvinopfuura bhodhoro rimwe. Mabhodhoro madiki anogona zvakare kuwedzera kushandiswa nekuderedza zvipingamupinyi uye nekudaro kuwedzera kuwanda kwezvikamu zvekunwa. Huwandu hwewaini yakachengetwa mumabhodhoro madiki inogona kutaridzika sediki. Zvidzidzo zvinoratidza kuti kuratidzwa kunoonekwa kune akakura zvikamu zvehukuru kunogona kugadzirisa maonero ezvinoumba chikamu "chakajairika" saizi. Kana mabhodhoro madiki achionekwa seadiki kwazvo, izvi zvinogona kutungamira mukumwa waini, sezvo mamwe mabhodhoro achivhurwa nekupedzwa panguva yechiitiko chekunwa.
Nhau dzakanaka ndedzekuti LGV waini inowanikwa mune yakatetepa 6.3 maununisi epurasitiki masirinda (masendimita masere pakureba, dhayamita pashoma kupfuura 8 inch ine screw cap), ichipa zvishoma zvishoma kupfuura avhareji huwandu hwakadururwa mugirazi rewaini rinogadzirira iyo sip yakakwana pandakagara ndega pamberi pekombuta yangu, ndichiedza kuramba ndakamuka panguva yemusangano weZoom.
Kunyange hazvo ukuru-hwekushandira saizi ichikurudzira kwandiri kuti ndichengete hura yewaini tsvuku uye waini ye LGV mukabhineti yangu yewaini uye inotonhodzwa mufiriji, ndinoda kunwa waini dzakanaka kana zvirinani kupfuura chero chinhu chiripo muhukuru hukuru.
Dzimwe nhau dzakanaka. LGV yakabatana neminda yakawanda inotungamirwa inotungamirwa kana kutungamirwa nevakadzi, kusanganisira Elisabeth Prataviera (Domaine de Menard & Haut-Marin), Ines Andrieu (Domaine de Caylus) naMartine Nadal (Domaine Nadal Hainaut) - ese akabatana neminda yemizambiringa inogara yakasimba kurima.
Nemabhodhoro madiki epurasitiki, iwine akakwana muhukuru, achikurudzira kuyedza uye kutsvagisa waini tsvuku, chena uye yakasimuka kubva kune vanogadzira waini yekutengesa.
1. Ines Andrieu. Domaine Caylus Rose Blend 2020. Musanganiswa wemazambiringa akura akasanganiswa uchishandisa Syrah (60 muzana) uye Grenache (40 muzana).
Kubva kuchikamu chekumaodzanyemba cheFrance (Pays d'Heralult - chikamu cheiyo hombe Languedoc-Roussillon dunhu), urwu rudo pakutanga mwenje wekorini pink waini (ndinogona kufungidzira frock yezhizha yeiyi isina kusimba coral / pink). Kunhuwirira kunoita kuti mhino dzangu dzifare sezvo dzichipa ruvengo rwe sitirobheri uye maranjisi. Muromo unofadzwa nemazano emaapuro, mapainapple uye trace yezvinonhuwira. Yakakwana yekupwanya padziva zuva rovira uye vanogeza vanodzokera kunogadzirira kudya kwemanheru.
2. Gerard Damidot. Chateau Val d'Arenc Bandol 2020. Musanganiswa weMourvèdre (80 muzana), Grenache (10 muzana) neConsault (10 muzana).
Inowanikwa muProvence (gomo rinopfuura, Quartier Val d'Arenc), iyo nzvimbo inochengetwa newinemaker Gerald Damidot (anobva kuBurgundy) uyo akashandura munda wemizambiringa kuita zviwanikwa zvekurima (2015) uye izvi zvinokanganisa kunaka kwemazambiringa. Ivhu remunda wemizambiringa rinoumbwa nemarara, zvisaririra, jecha remajecha, ivhu remarara uye dombo rejecha risina mushonga wekuuraya zvipuka kana kemikari chero kupi; kuchekerera uye kukohwa mabasa anopedzwa nemaoko. Bandol inoonekwa seyakanakisa rose reFrance inogara yakakwira kupfuura 90 mapoinzi.
Iyo Bandol inopa beige pinki ruvara kune iro ziso, rinounza vibes yechena pichesi, pink grapefruit, sitirobheri, ndimu uye lime kumhino, nepo ma berries uye macitrus achivaraidza mukanwa. Iyo yakajeka uye inotonhorera acidity inoita kuti ive iyo yakakwana BFF yemasaladhi, quiche, bouillabaisse, uye inotonhora yakakangwa huku mapikniki.
3. Elisabeth Prataviera. Domaine de Menard. Sauvignon Blanc (100 muzana) 2020.
Iwo mahekita zana nemakumi mashanu eminda yemizambiringa iri mumusha mudiki weGondrin, munzvimbo yeGP yeCote de Gascony pane terroir yakare panodyarwa mizambiringa muvhu risina kudzika, rine matombo, rakapfuma-fossil richishandisa chete manyowa efotereza. Kukohwa kunopedzwa husiku kana mangwanani-ngwanani.
Kukwezva kweziso ingangoita mvura nyowani yakajeka neakajeka egoridhe. Funga maruva nemichero (kunyanya grapefruit, maapuro, nemarimu) izvo zvinounza hwema-senge hwema hwemhino kumhino. Mamwe maruva kupfuura michero inopfekedza mukanwa pamwe nekushamisa kusimba uye kupenya acidity kupera. Yakakwana yekudyira kwechirimo uye yezhizha nesalmon uye inotonhora-mvura lobster miswe kana kunakirwa se "kumira wega."
4. Martine naJean-Marie Nadal. Martine Nadal. Nadal-Hainaut. Cabernet Sauvignon (100 muzana) 2019.
Jean Marie Nadal chizvarwa chechishanu pachivako chine mahekita makumi mana nematatu chakasimwa nemizambiringa mumoyo weLanguedoc-Roussillon (kutanga muna 43). Saiye muridzi uye anogadzira winemaker, Nadal anotsigira kurima kwakasimba uye muna 1826 akachinja mashandiro ekurima kwehupenyu. Mazambiringa anokohwa mangwanani-ngwanani uye akarongedzwa nemaoko asati aiswa mutangi. Vakwegura mune nyowani dzeFrench oak migomo.
Kana rakasviba rima repepuru richikwezva meso ako uye hwema hwemakrisiti matema akaibva nehuni yakanyorova (yakadzika musango), maabhuribheri akaomeswa, plums uye michero mitsvuku yakasviba zvinonakidza mukanwa mako, uchiendesa tannins dzakashinga… ipfungwa yako yewaini inonaka, uchave unofara musasa neichi chiitiko chekuravira. Pair pamwe neyakajairika nyama yakakangwa, nyama yemombe kana pasita.
5. Laurence naStephane Dupuch. Peyredon Crus Bourgeois Haut-Medoc 2019. Musanganiswa weCabernet Sauvignon (63 muzana), Merlot (37 muzana).
Crus Bourgeois irondedzero yewaini yeBordeaux, France iyo yakatangwa muna 1932 ndokutanga patsva Kukadzi 20, 2020. Inongovhara chete waini tsvuku inogadzirwa mumazita masere padunhu reLeft Bank Medoc anga asingabatanidzwe neyakaiswa 1855 yewaini, asi parizvino inonzi "yakanakisa." Kurongwa uku kunovandudzwa makore ese mashanu.
Iyo 24-acre minda yemizambiringa iri muPoujeaux. Garnet hues mubairo weziso nepo mhino ichivhiringidzwa nemichero yematombo, nyowani mbiriso uye zvinonhuwira zvakapfava. Iyo nzvimbo inogadzira waini iri French oak akura aine echinyakare matema-currant toni pamwe nemazano evanilla, fodya, mablackberries, plums uye dehwe. Pair nemombe, nyama yenguruve uye nyama yakakangwa.